Google gbadara na-erughị ọkara ọnụahịa USB-C na nkwụnye ọkụ jaaka | Akụkọ akụrụngwa
N'afọ gara aga n'oge ngosi nke Google Pixels mbụ, ụmụ okorobịa si Mountain View na-etu ọnụ banyere ịga n'ihu na-enye ụda isi okwu na ngwaọrụ mbụ ha nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara. Otu afọ mgbe e mesịrị, ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị loda okwu ya, ebe ọ bụ na ọ wepụrụ kpamkpam ekweisi jack ọhụrụ Google Pixel ụdị.
Anyị nwekwara ike iji ekweisi anyị na ndụ anyị niile, site na USB-C na 3,5 mm jack nkwụnye ọkụ, ihe nkwụnye nke gụnyere na igbe Pixel. Ọ bụrụ na anyị efunahụ ya, anyị ga-akwụ $ 20 maka nke ọhụrụ.
O yiri ka Google chọrọ inweta ego na ndị na-enweghị nghọta na-enweghị atụ nke nwere ike ịfufu ihe nkwụnye a, Ebe ọ bụ na ọnụahịa dị elu maka obere nkwụnye ahụ enweghị uche, ebe ọ bụ na dollar 11 dị ọnụ karịa otu ngwaọrụ ahụ Apple na-enye, mana ya na njikọ Lightning na jaket 3,5 mm. Google emeela ka ọnụ ahịa ya rịa ala, rue mgbe ọ ga-abụ otu ọnụ ahịa ya na Apple, nke dollar 9 dabara, tinye ya na ọnụahịa nwere ezi uche.
Google ekwubeghị okwu ọ bụla na nke a, dịka Amaara m na ọ dịghị ihe dị mma iji weta obere ihe nkwụnye ego a n'ọnụ ahịa dị elu. Mana dịka ọ bụ ihe nkwụnye ọkụ na 3,5 mm jack maka iPhone, ọ na-enye anyị ohere ịge egwu site na ekweisi na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị chọrọ irite uru na mgbe anyị na-ege egwu, na-akwụ ụgwọ ngwaọrụ anyị, anyị ga-abanye na ngwaọrụ nke onye nrụpụta Moshi, nke na-enye anyị nkwụnye maka $ 44,95 nke anyị nwere ike ịgba ụgwọ ma gee egwu n'otu oge .
Ngwaọrụ Moshi a $ 10 dị oke ọnụ karịa otu Belkin na-enye maka iPhone na Storelọ Ahịa Apple, yabụ ọ dị ka onye nrụpụta a n’enweghị ihere chọrọ itinye ego. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ iPhone nwekwara otu ụdị Belkin ahụ na ahịa, mana nke Amazon mere maka $ 29. Eleghi anya, Amazon ga-ebuputa nkwụnye nkwụnye ya maka ngwaọrụ nwere njikọ USB-C na enweghị ọdụ ụgbọ mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Google na-adaba na ihe na-erughị ọkara ọnụahịa nke USB-C ka nkwụnye nkwụnye ọkụ
Ọnye na -bụ Juan Antonio? dijo
Ndewo, Ebee ka m nwere ike ịzụta ihe nkwụnye a? Na ihe ọzọ, ọ dị adị na ekwentị ọ bụla nwere ụdị USB C? Daalụ
Ndewo Juan Antonio, ozugbo na Googlelọ Ahịa Google.